कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई कोरोना संक्रमण Canada Nepal
बैशाख २० २०७८
काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ । आफुलाई कोरोना संक्रमण भएको बारे प्रवक्ता शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् ।
उनले आइतबार बेलुकी स्वाब दिएको र सोमबार बिहान रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको बताएका छन् । उनले आफुलाई ज्वरो र जीउ दुख्ने समस्या देखिएको बताएका छन् । कोरोना संक्रमण देखिएपछि अहिले डा. अनुप बास्तोलाको निर्देशनमा औषधि सेवन शुरु गरेको र अहिले डेरामै आइसोलेसनमा रहेको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन् - 'ज्वरो र जीउ दुखाइ बढेपछि आइतबार बेलुकी Star Hospital पुगेर स्वाब दिएं । बिहानिपख रिपोर्ट आयो-पोजेटिभ । टेकु´का डा मित्र अनुप बांस्तोलाको निर्देशन अनुरूपको औषधि सेवन शुरु गरेको छु । डेरामै आइसोलेसनमा छु । लक्षणले च्यापेका छन् तर मनोबल उच्च छ । सबैलाई विनम्र आग्रह छ - सजग बनौं !'
बैशाख २०, २०७८ सोमवार १०:११:११ बजे : प्रकाशित